Desktọpụ China Portable Air purifier Sterilizer Maka ụmụaka, ụmụaka, ndị agadi rụpụta na ụlọ nrụpụta | Saselux
Ekwentị mkpanaaka, ụmụaka, ndị agadi
Aha ngwaahịa: Onye nhicha desktọpụ
Ike batrị: 1000mAh
Voltage batrị: 3.7V
Ike batrị: 37W
Myọcha：Pre-filter + HEPA + Carbon na-arụ ọrụ
Ike (CFM): 50 cubic mita kwa awa
[Desktop.] Igwe nchacha ikuku] Igwe nchacha ikuku a nwere ihe nzacha tupu, Ezigbo HEPA Filter na Ọrụ nchara carbon na -arụ ọrụ iji nyocha 99.7% nke irighiri ikuku dị ka uzuzu, pollen, anwụrụ ọkụ, isi, na anụ ụlọ. Ha na-enwe mmekorita gburugburu ebe obibi bụ ezigbo ikuku ikuku ụlọ maka ndị nwere anụ ụlọ, ndị na-ese anwụrụ, ụmụaka ma ọ bụ onye ọ bụla na-achọ imeziwanye ogo ikuku.
②[USB Kwadoro] Igwe nchacha ikuku a sterilizer na -akwado site na USB. Ọ bụ ihe na -ehicha ikuku nke onwe, nke na -emepụta ikuku ikuku gburugburu gị na tebụl gị n'ụlọ, n'ọfịs ma ọ bụ n'ọfịs ụlọ!
③[Obere Igwe nchacha ikuku] Kọmpat, obere na mfe, Mini Air Purifier a nwere atụmatụ otu bọtịnụ dị mfe maka ịrụ ọrụ dị mfe. Igwe ikuku ikuku nke desktọọpụ a nwere ike dabara nke ọma na tebụl gị ma ọ bụ tebụl n'akụkụ àkwà ma dị fechaa na imewe na -eme ka ọ dị mfe ibufe.
④[Ngosipụta HD] Ngosipụta ngwa ngwa nke ngwa eletriki na ike eletrik na mmetụta ya enwere ike ịhụ ya n'oge ọ bụla iji duru gị.
⑤[Onye nchacha ikuku nkeonwe] Ihe nchacha ikuku hepa a na -arụ ọrụ na ọkwa mkpọtụ dị ala, na -eme ka izu ike, ikuku dị jụụ. Ọ na -ehicha ikuku gburugburu gị na -agbaghasị ọrụ gị, mmụta gị ma ọ bụ ụra gị. MGBE:Ogologo: 160mm*268mm.
Nke gara aga: Ọkụ Mpụga Ọpụpụ Mpụga ọkụ na -ewu ewu na America
Osote: Ezigbo ogo 10kva Single Generator Silent Silent Generator
obere ikuku purifier
ụgbọ ala purifier
CE HEPA UV ikuku ikuku
Wearable Air purifier Olu olu Freshener On ...